लम्जुङको स्कूलमा मिसले छोलिदिनुभएको कथा | Miracle Nepal
लम्जुङको स्कूलमा मिसले छोलिदिनुभएको कथा
लम्जुङको स्कूलमा रास्ट्रिय विकास सेवा (रा. बि. से.) कार्यक्रम अन्तर्गत त्रिभुवन विश्व विध्यालयमा एम. ए. अध्यनरत मिसले छोलिदिनुभएको कथा ।
धेरै बर्ष अगाडिको (२०३१ साल) कुरो हो । त्यो बेलामा नेपालमा रास्ट्रिय विकास सेवा (रा. बि. से.) कार्यक्रम अन्तर्गत त्रिभुवन विश्व विध्यालयमा एम. ए. अध्यनरत बिद्यार्थीहरुले एक बर्ष गाउको स्कूलहरुमा पढाउनुपर्थ्यो । त्यसै कार्यक्रमबाट हाम्रो लम्जुङको स्कूलमा (स्कूलको नाम दियो भने त्यो समयमा पढाउने मिसको नाम खुल्ने डर भएकोले स्कूलको नाम भन्न असमर्थ छु) पनि पढाउन एक जना मिस आउनुभएको थियो । हाम्रो घर स्कूलको नजिकै भएको र पहिले पनि एक जना रा. भि. से. शिक्षिका बसिसक्नु भएकोले नयाँ आएको मिस पनि हाम्रो घरको धन्सारमानै बस्ने हुनुभयो । त्यो बेलामा म ६ कक्षामा पढ्थेँ । गाउको बिद्यार्थी अंग्रेजी कम्जोर हुने नै भयो । मेरो बाबा सानैमा मर्नु भएकोले म टुहुरोले अन्त गएर ट्युसन पढ्ने त्यस्तो अवस्था पनि थिएन । त्यसैले मिसले मलाई अंग्रेजीको ट्युसन पढाइदिने बिचारले मेरो आमालाई भन्नुभयो रामुको अंग्रेजी कम्जोर छ म यसलाई बिहान बेलुका अंग्रेजीको ट्युसन पढाइदिन्छु । हुन त उहाँ भूगोल शिक्षिका हुनुहुन्थ्यो तैपनि मेरो आमाबाट ट्युसनको पैसाको आसा भन्दा पनि उहाँले कपडा धोइदिने पकाएको भाडा पखाल्ने आसा गर्नुभएको रहेछ । आमाले पैसा दिन नपर्ने भए हुन्छ म काम गर्दिन्छु भन्नुभयो । त्यसैले मलाई उहाले बिहान बेलुका पढाउँन थाल्नु भयो ।
एकदिन पढ्दा माघको राति ९ बजेको हुँदो हो, गाउँमा बिजुली नभएकोले राति ९ बजे त मध्ये रात जस्तै हुन्थ्यो त्यसको माथी झरी परिरहेको थियो । मिसले झरी परिरहेको छ किन घरमा जान्छौ र यहि धन्सारमा नै सुतेपनि भैहाल्छा भन्नुभयो । यो जाडोमा के ओड्ने नि मिस भनेर सोध्दा उहाँले म संग स्लीपिंग ब्याग छ त्यही ओडेर सुत्न भैहाल्छ भन्नुभयो । मत कहिल्यै पनि स्लीपिंग ब्याग नदेखेको मान्छे स्लीपिंग ब्याग कस्तो हुने रैछ भनेर देख्ने लोभले हुन्छ भनिदिए । त्यसपछि उहाँले स्लीपिंग ब्याग मलाई दिएर पढेको गुन्द्रीमा सुत्न भन्न भयो । पहिलो पटक स्लीपिंग ब्यागमा पस्दा त थैलो भित्र पसेजस्तो लाग्यो तर न्यानो भने घरको सिरक भन्दा पनि बढी लाग्यो । मिसले धन्सारको झ्यालबाट मेरो आमालाई बोलाएर पानि परिरा'को छ रामु यहि सुत्छ है भन्नुभयो । आमाले पनि नाई भन्ने कुरो भएन । मीसले लाल्टिन निभाउनु भयो र हामी सुत्यौँ ।
मध्ये राततिर पिसाब लाग्यो र उठ्दा त मीस निदाउनु भएकै रहेनछ । किन के भो रामु, उहाँले सोध्नुभयो । पिसाब लाग्यो कि के हो म पनि पिसाब फेर्न जान्छु हिड भनेर टर्च लाएट बाल्नुभयो । बाहिर गएर पिसाब फेरेर आएपछि भन्नुभयो तल गुन्द्रीमा डर लागे यहि खाटमा आएर सुत । मैले डर लाछैन भनेपछि हुन्छ तँ सुत भन्नुभएर उहाँ खाटमा जानुभयो । तर त्यसपछि त उहाँ नै तल म सुतेको गुन्द्रीमा आएर मसंग टासिएर सुत्न थाल्नुभयो । मत के गरौ के गरौ भएँ । मीसलाई केहि भन्ने कुरो पनि भएन । त्यसपछि त उहाँले स्लीपिंग ब्यागको चेन खोलेर मेरो गुला तिर पो हात ल्याउन थाल्नुभयो । मेरो त जिउ सिरिङ्ग हुन थाल्यो तर म त यन्त्र जस्तै मीसले जे गरेपनि केहि भन्न नसक्ने स्थितिमा थिए । मीसले मेरो लाडो चलाउन थाल्नुभयो । मैले त अहिले सम्म छोलेको पनि थिएन त्यसैले लाडोको छाला पनि फर्केको थिएन तर चलाउदा लाडो त सन्कन थाल्यो । मीसले मेरो हात उहाँको दुधमा लगेर च्याप्प पार्न लगाउनु भयो । मैले दुध समात्दा उहाँ त स्स्सी… आह्ह… उफ्फ… आह्ह… गर्न थाल्नुभयो । त्यस राति त्यतिकैमा अब सुत भन्नुभयो र आफु पनि खाटमा जानुभयो ।
भोलि बेलुका देखि त मिसले आमासंग भनेर उहाँको कोठामा नै पढेपछि सुत्न स्वीकृति लिनुभयो । १२ बर्षको केटो कसैले शंका गर्ने पनि भएन । त्यहीँ माथि गाउ घरमा ति कुराहरू सामान्यनै हुन्थ्यो । शहरको जस्तो आइमाईसंग कोठामा सुत्दामा चिकिहाल्छ भन्न पनि थिएन ।
भोलिपल्टबाट त मिसले मलाई खाटमासँगै सुताउन थाल्नुभयो | उहाँले तेल लगाएर मेरो लाडोको छाला फर्काइ दिनुभयो र दुध चुस्न लगाएर पल्टिनुभयो म पनि उहँको दुध चुस्न थाले । उहाँले एक हातले दुध समात्न भन्नुभयो मैले पनि त्यसै गरे । मिस त इस्स्स्…उम्म्म्… आह्हउ… आम्म्म्… गर्न थाल्नुभयो र उठ्नु भयो र मेरो भर्खरै छाला फर्काएको लाडो चलाउन थाल्नुभयो । लाडोको छाला तल माथि गरेर छोल्न थालेपछी त मलाई भित्रैबाट काउकुती लाग्न थाल्यो र एकछिन पछि त जिउ सिरिङ्ग हुने गरि मेरो मुजीबाट सेतो झोल निस्क्यो । म त झसङ्ग भए तर त्यो नै रहेछ जिन्दगि को पहिलो फुसी झराई । त्यो पनि मीसको हातबाट…
बाकीँ दिनहरु कसरी बिते पूरा कथा पढ्नको लागि दिनहुँ साइट भिजिट गर्दै गर्नुहोला धन्यबाद !
Miracle Nepal: लम्जुङको स्कूलमा मिसले छोलिदिनुभएको कथा